Gareth Bale Oo Ka Tegaya Real Madrid Iyo Kooxda Uu Ku Sii Jeedo
HomeSuuqaGareth Bale Oo Ka Tegaya Real Madrid Iyo Kooxda Uu Ku Sii Jeedo
War aanay ku farxin kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa saaka ku soo baxay mid ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer adduunka, kaas oo sheegaya in xiddiga reer Wales ee Gareth Bale uu doonayo in uu ka tago kooxdaas.
Wargeyska The Sun ee ka soo baxay UK ayaa waxa uu saaka boggiisa hore ku daabacay in Gareth Bale oo ay da’diisu tahay 27 jjir aanu ku faraxsanayn qorshe ciyaareedka tababare Zinedine Zidane iyo ku-taabacsanaanta madaxweyne Florentino Perez ee ah in ciyaartoyga kooxda laysku bedbeddelo, boos joogto ah oo uu qof leeyahayna aanu jirin.
Sida warku sheegay, Gareth Bale waxa uu doonayaa boos joogto ah oo aanay cidina ku qabsanin iyo in loola dhaqmo sida Cristiano Ronaldo oo kale oo aanay cidina ku safaadin booskiisa inta uu caafimaad qabo.
Kulankii Villarreal ay 1-1 ku kala baxeen Real Madrid, ayaa Gareth Bale la saaray daqiiqaddii 70-aad, waxaana soo galay Lucas Vazquez oo si fiican u dhaqaajiyey dhinicii hurday ee Bale, hase yeeshee, Bale kuma faraxsana in inta isaga la saaro haddana aan la taabanin Ronaldo, waxaanu u arkaa caddaalad darro.
Arrin kale oo mustaqbalka Bale mugdi gelisay ayaa ah, in madaxweyne Perez uu boos joogto ah iyo mushahar kordhin badan u ballan-qaaday Cristiano Ronaldo, taas daraadeedna ay Bale ka go’an tahay in aanu marnaba ka hoosaynin.
Haddii uu Bale go’aansado in uu ka tago, sida bilihii u dambeeyeyba suuqa ku jirtay, waxa diyaar u ah Manchester United iyo tababaraheeda Jose Mourinho oo wakhti kasta jecel in uu Bale haysto.
Full Highlights: Chicago Cubs vs St.Louis Cardinals
Chelsea Oo Ilaa Hadda Figta Sare Laga Fujin La’yahay EPL